सिरानी मुनि लसुन राखेर सुत्दा हुन्छन् यस्ता फाइदा.. !!::Leading Nepal News
सिरानी मुनि लसुन राखेर सुत्दा हुन्छन् यस्ता फाइदा.. !!
खानालाई स्वादिष्ट बनाउँन बाहेक लसुनलाई केही घरेलू उपचारमा पनि प्रयोग गरिँदै आएको छ ।यो स्वास्थको लागी निकै लाभदायक मानिन्छ । यति मात्र होइन लसुनको आफ्नै परम्परागत महत्व पनि रहेको छ ।
जसले नकारात्मक शक्तिलाई भगाउन सक्छ । सिरानीमुनि लसुन राख्नुको आफ्नै मान्यता रहेको छ । सिरानी मुनि लसुन राखेर सुत्दा निन्द्रा पर्न गाह्रो हुने व्यक्तिलाइ निद्रा पर्न जान्छ ।लसुनको सल्फरयुक्त यौगिक र कडा सुगन्धको शान्त प्रभावले मिठो निन्द्रा लगाउँछ ।
त्यस्तै, सिरानीमा लसुन राख्नाले हामीमा दिनभरी सकारात्मक प्रभाव पार्नका साथै अर्को दिनको लागि रातभर ऊर्जा संकलन गर्छ । त्यस्तै मिठो निन्द्राका लागी एक गिलास दुधमा एक पोटी लसुनलाई ट्क्रा पारेर तीन मिनेटसम्म उमालेपछि सेलाउन दिनेएक चिनी चम्चा मह दुधमा मिसाएर पिउने गर्नाले निन्द्रा लाग्छ । तर तयार भएको दुध सुत्नु अघि पिउनु पर्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्..>> बुढ्यौलीले मात्र हैन, यी कारणले पनि लाग्छ बिर्सने रोग
तनावले भरिएको यो व्यस्त जिन्दगीमा घरिघरि बिर्सने बानी धेरैलाई लाग्न थालेको छ । पहिला त यो समस्या बूढो उमेरका मानिसलाई मात्र हुन्थ्यो तर अहिले यो बच्चाहरूमा पनि देखिन थालेको छ । सानो सानो कुरा बिर्सने समस्यालाई बेवास्ता गर्दा पछि त्यो अल्झाइमर वा डिमेन्सिया बन्न पुग्छ । यहाँ हामी यसबाट छुटकारा दिलाउने उपाय सिकाउँछौं ।
डिप्रेसन – धेर तनाव लिँदा वा डिप्रेसन हुँदा पनि बिर्सने रोग लाग्छ । तनावसँग जोडिएका हर्मोन न्युरोनहरूले दिमागका कोशिकाको काममा ढिलाइ गरेर बिर्सने खतरा बढाइदिन्छन् ।
पूरा निद्रा नलिँदा- हरेक व्यक्तिले दिमा कम्तीमा आठ घन्टा सुत्नुपर्छ । व्यस्त जीवनका कारण राम्रो निद्रा नपाउँदा दिमागमा नराम्रो असर पर्छ । अनि सानो सानो कुरा बिर्सन थालिन्छ र पछि यो समस्या अल्झाइमर बन्न पुग्छ । धूम्रपान- रक्सी र चुरोटको सेवन शरीरका लागि विषसमान हुन्छ र यसले भुल्ने रोग पनि लगाउँछ । विशेषज्ञहरूका अनुसार, धूम्रपानका कारण दिमागका रक्तधमनीहरू साँघुरिन्छन् र मस्तिष्कसम्म पर्याप्त अक्सिजन पुग्न पाउँदैन । अनि तपाईं भुलक्कड हुन थाल्नुहुन्छ ।
भिटामिन बी१२ को कमी- स्वस्थ रहनका लागि अनि रातो रक्तकोशिका निर्माणका लागि शरीरलाई भिटामिन बी१२ आवश्यक हुन्छ । यसको कमीका कारण स्मरणशक्ति गुम्ने, चिडचिडिने र तनाव जस्ता समस्या हुन्छन् र तिनै पछि डिमेन्सियामा परिणत हुन्छन् । यसबाट जोगिन पालुंगो, पनीर र दूधबाट बनेका खानेकुरा खानुस् । धेर औषधि खाँदा पनि बिर्सने रोग लाग्छ । चिकित्सकको सल्लाहविना पगितो औषधि नखानुस् ।धेर टेन्सन लिँदा अनि शरीरमा पर्याप्त मात्रामा थाइरोइड हर्मोन बन्न पाउँदैन । थाइरोइड हर्मोन बन्न पाएन भने बिर्सने समस्या आउन थाल्छ ।
स्मरणशक्ति बलियो बनाउने उपाय- स्मरणशक्ति बलियो बनाउनका लागि बदाम र अन्य ड्राई फ्रूट खाने गर्नुस् ।हरियो सागपात, साबुत अनाज, जैतूनको तेल र फलको सेवनले पनि दिमाग तेज बनाउँछ । दिनदिनै यिनको सेवन गर्नुस् । उमेर बढ्दै जाँदा आफ्नो काम आफैं गर्ने मानिसलाई अल्झाइमर्सको खतरा कम हुन्छ र स्मरणशक्ति पनि तेज हुन्छ ।बिर्सने रोगका बेलामा दिमागमा बढ्ने विषालु बीटा एमिलाृयड नामक प्रोटीनको प्रभावलाई ग्रीन टीको सेवनले कम गर्न सकिन्छ ।दिनदिनै कम्तीमा २० मिनेट व्यायाम गर्नुस् । अनि बिहान बेलुका १० मिनेट डुल्दा पनि बिर्सने समस्या कम गर्न सकिन्छ ।